Ihe ị ga-ahụ na Australia | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Australia, Ihe ị ga-ahụ
Otu n'ime ihe ndị kasị magburu onwe mba na-aga na njem bụ Australia: O nwere ụdị ala dị iche iche, ọ dị ugbu a, yana ndị mara mma, o nwere ọtụtụ mmemme ọdịbendị, akụkọ dị mkpirikpi ma na-atọ ụtọ na oke nke anyị ji obere.
Kedu ihe ị ga-ahụ n'Australia? Ọ dị mma, azịza ya siri ike ebe mpaghara Australia dị ukwuu ma na-ejegharị na mba ahụ dum na-ewe oge na ego. Otú ọ dị, anyị nwere ike ikwu banyere ihe dị mma ileta na-echefughị ​​ihe ndị ọzọ. Ka anyị chọpụta Australia!
Ọ bụ agwaetiti gịnị bụ Gọọmentị Bekee ma taa ọ bụ akụkụ nke Commonwealth. A mụrụ ya dị ka ógbè ntaramahụhụ mgbe ụlọ mkpọrọ dị na UK gbawara, n'ikpeazụ ndị a mara ikpe na ndị ọzọ kwabatara, na-amụ ọha mmadụ dị iche iche.
Australia ekewa mpaghara asaa: Western Australia, Northern Territory, Queensland, South Australia, New South Wales, Victoria na Tasmania. O doro anya na ị maara obodo ndị dị ka Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth ma ọ bụ Canberra ma ọ bụ ebe nlegharị anya dị ka Great Barrier Reef, Ayers Rock, Byron Bay or the Great Ocean Highway.
Ka anyị leba anya n’obodo ụfọdụ na nke mbụ, marakwa ụfọdụ ebe kacha mma. Ka anyị bido Sidney, bụ obodo kachasị ewu ewu. Ọ bụ isi obodo nke steeti New South Wales, na-abụkarị ọnụ ụzọ ámá mba ahụ. Obodo cosmopolitan, na ụlọ oriri na ọ museụ andụ na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na n'ime nkeji ole na ole na-anya nnukwu osimiri, dị ka Bondi Beach a ma ama, nke kachasị mma maka sọọfụ.
Nke a bụ ụzọ, Pzọ Bondi ke Coogee: na-amalite na Bondi ọdọ mmiri ma mechie kilomita isii mgbe e mesịrị na-aga ije ugwu. Yabụ, ọ bụrụ n'ịga ihu igwe dị mma, ị ga - enweta foto kacha mma. Ọzọkwa na Sydney ị nwere ike ịnara nke a Okirikiri ụgbọ mmiri Quay na mgbe 12 nkeji iru Ogige Taronga. Ọ bụrụ na zoos abụghị ihe gị bụ Ralọ Opera nke Sidney, saịtị nke ị nwere ike ịga leta azụ na-amalite na 7 am.
Otu ahụmahụ nke m kwadoro na-arịgo Akwa Sidney. Enwere ọtụtụ njegharị enwere ike ha niile dị mma. Àkwà mmiri ahụ dị mita 124 n’ogologo ma echiche ya magburu onwe ya. I nwekwara ike na-eje ije site na agbata obi ochie nke The Rocks, narị afọ nke XNUMX, ma ọ bụ mpaghara a maara dị ka Dreamtime Southern X nke nwere ihe nketa ndị Aborigine ma gosipụta mmekọrịta nke ndị a na ala, ụsọ mmiri na ọwa mmiri.
Na ngwụsị izu Nkume nwere nnukwu ahịa. Ọ bụrụ na ụlọ ihe ngosi nka na-amasị gị na Sydney enwere Museumlọ Ahịa Australian na Museum of Contemporary Art. Zọ kachasị mma iji laa n'iyi bụ mpaghara dịpụrụ adịpụ Ugwu Surrey ya na ụlọ ahịa ya na ihe ntụchi ya. Na ikwu okwu banyere Ogwe, ọ bụrụ na ị masịrị mmanya, Australia na-amịpụta mmanya dị mma ma site n'obodo a enwere ike ịbanye na njem nke Ndagwurugwu Hunter na winri 120 ya.
Melbourne Ọ bụ obodo ọzọ ama ama n’Australia, ama ama ama ama ama nke Australia. Ọ na-ekpo ọkụ n'oge okpomọkụ n'ihi ya, ọ ga-adị mma ka ị gaa n'oge opupu ihe ubi ma ọ bụ n'oge mgbụsị akwụkwọ. Enwere ụgbọ elu na-aga Melbourne na ọdụ ụgbọ elu dị naanị ọkara elekere site na obodo ahụ. Ogbe ndịda dị oke mma na n'okporo ámá ndị nwere cobbled na ụlọ ahịa na ụlọ ahịadị ka Flinders Street, Collins Street ma ọ bụ Degrave Street. Nwere eziokwu Ikuku London ....
Enwere ahịa, Ahịa Reina Victoria, nke kasị ukwuu n'èzí n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ. E nwekwara Ahịa South Melbourne na ngwụsị izu, ndị na-emepụta mpaghara na-agbakọta na Rose St. Artists Market, nke a na-eji ụgbọ ala aga.
Na Melbourne enwere kwa Royal Botanic Gardens, Chinatown, St. Kilda Beach dị nnọọ 30 nkeji site na tram. Na okwute mara mma, ebe ahụ na-ejegharị n'akụkụ Osimiri Yarra ma ọ bụrụ na ị chọrọ ọzọ ọdịdị otu awa pụọ, na-aga n'ebe ndịda, ị ga-eru Ala Mmiri nke Mornington. Nzuko bụ obodo Sorrento, site na ebe ị nwere ike ịmalite Walk onye nde, otu kilomita na ọkara dị n'akụkụ ugwu. Echiche nke Port Philip Bay dị ebube.
Lee enwere wineries, ihe karịrị 50, ndị ọkachamara na ya Chardonnay na Pinot Noir N'ihi ya, ọ bụ ebe ma ọ bụ ịmegharị winery ma ọ bụ iri nri na ire ụtọ mpaghara. Site na ebe a, n'ikpeazụ, ezigbo nhọrọ bụ akụkụ nke Okporo Oceanzọ Oké Osimiri, ụzọ dị n'ụsọ oké osimiri nke, ekwenyere m, bụ nke kachasị mma n'ụwa.
Brisbane bụ isi obodo Queensland. Iji nwee ekele maka ịma mma ya, ị ga-arịgo elu nke Akụkọ Akụkọ Bridge, Mita 80 n'ịdị elu. Mgbe ahụ, enwere ebe ngosi ihe mgbe ochie, ebe a na-ere ahịa, ebe ndị mara mma, ụlọ ndị mara mma nke obodo, na ụgbọ mmiri. Ọ bụrụ na ọ masịrị koalas enwere Lone Pine Koala Ebe Nsọ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwaga ntakịrị n'ụsọ oké osimiri ahụ, e nwere ndị mara mma Agwaetiti Moreton, otu n’ime agwaetiti kasị ukwuu n’ụwa.
N'ebe a, ị ga-enweta ebe ụgbọ mmiri si n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, n'ime nkeji 90. Enwere osimiri, nnụnụ, ọdọ mmiri na ụzọ ụkwụ ebe niile, ma site na June ruo November na-apụta whale ndị na-akwaga mba ọzọ. Amen nye ụgbọ mmiri na coral na-enye ogbu mmiri ya nnukwu saịtị nke ndakpu ala mmiri.
Perth bụ isi obodo Western Australia, a super Sunny state. E nwere oke osimiri, Osimiri CottesloeDịka ọmụmaatụ, Leighton ma ọ bụ North Beach. Na Agwaetiti Rottnest ọ bụ naanị 18 kilomita site n'ụsọ oké osimiri ma nwee osimiri 63 mara mma, 20 bays na ọtụtụ obi iru ala.
N'ikpeazụ, ị nwere ike ịme ihe Swan osimiri irughari na-abata na Fremantle ya na ikpe mara ya n'oge gara aga dị ezigbo mkpa n'ụlọ mkpọrọ. Na ngwụsị izu, obodo ahụ nwere ahịa ndị mara mma. N'ezie, Perth, dị ka Sydney, Brisbane ma ọ bụ Melbourne na-enyekwa ihe na-atọ ụtọ ụbọchị njem ...
Ikwu okwu n’otu ederede banyere ihe ị ga-ahụ n’Ọstrelia siri ike n’ihi na mba ahụ buru ibu ma mara ihe niile na-achọ oge na ego. Ebe dị anya dị ogologo, njem nke ala adịghị mma, yabụ ị ga-ebu ụgbọ elu na nke ahụ na-eme ka mmefu ego dị oke ọnụ. Ọ pụtaghị na ịnweghị ike isi mba gafere mba ahụ, mana ọ dịghị mfe dị ka ịbanye n'ụgbọ okporo ígwè mgbọ.
E nwere obodo ndị ọzọ na-atọ ụtọ, Cairns, Adelaide, Hobart, Ogige Gold ya na okpomọkụ ya ebighi ebi ... Ọ bụ ya mere m ji nọrọ ọdụ na-eche echiche nke ọma ihe anyị chọrọ ileta. Ma mara, ee, na ọ bụrụ na ọ bụ njem mbụ anyị na Australia ọ nweghị ụzọ ọzọ karịa ịhapụ ụfọdụ ebe na ndepụta.
N'ikpeazụ, na-eche echiche banyere nnukwu ebe nkiri ahụ nke meworo mba a ka ọ bụrụ njem nleta, enweghị m ike ịkwụsị ịkpọtụrụ ndị Nnukwu Ihe Mgbochi, Ayers Rock, Blue Mountains ife oma Agwaetiti Tasmania nke gụnyere ịme ụgbọ mmiri.
Jidere otu maapụ, tọọ mmefu ego ma kpebie ebe ị ga-aga. Obi abụọ adịghị m na ị ga-achọ ịlaghachi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Oceania » Australia » Ihe ị ga-ahụ na Australia